Abenzi beplate yentsimbi engenasici - I-china ipleyiti yentsimbi engenanto, abaXhasi
Iphepha le-nickel yentsimbi engama-304 ebunjiweyo yentsimbi ye-nickel sheet yentsimbi yokungcangcazela yentsimbi yokugqiba iipleyiti ezingama-304l
Yintoni umbala ongagqwethiyo ongu-304 umbala?
Yenziwe ngentsimbi engama-304 ipleyiti yocingo yokuzoba yinkangeleko efana nocingo kumphezulu wesinyithi.
Le yitekhnoloji yokuqhubekeka yentsimbi engenasici. Umphezulu matt, kwaye kukho umkhondo wokuthungwa kuwo ngononophelo, kodwa awunakuva.
Iyanxiba ngakumbi kunesiqhelo intsimbi eqaqambileyo engenazingcingo kwaye ijonge phambili ngakumbi.
Umphezulu omhle kunye neendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa; nokumelana elungileyo, iyahlala ixesha elide ngaphezu ngentsimbi yesiqhelo, nokumelana ngcono; amandla aphezulu, ke kunokwenzeka ukusebenzisa iipleyiti ezincinci; iqondo eliphezulu le-oxidation kunye namandla aphezulu, ke iyakwazi ukumelana nomlilo; Ukulungiswa kobushushu obuqhelekileyo, Oko kukuthi, ukuqhubekeka ngokulula kweplastiki. Ngenxa yokuba akukho mfuneko yonyango lomphezulu, kulula kwaye kulula ukuyigcina; ukucoceka, ukugqiba okuphezulu; ukusebenza kakuhle kwe-welding
321 eshushu Hot ipleyiti steel
Inkcazo malunga ne-321 / 321H insimbi engenasici
Igcina ukumelana okuhle nokubola okungaphakathi kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-800-1500 ° F (427-816 ° C) kunye nemvula ye-chromium carbide. Ngenxa yokongezwa kwe-titanium kulwakhiwo, i-321 eshushu isongwe i-stainless steel plate isenokugcina uzinzo kwimeko yokwakheka kwe-chromium carbide.
Ipleyiti yesinyithi eshushu engenantambo engama-321 inezibonelelo kwindawo enobushushu obuphezulu ngenxa yeempawu zayo ezigqwesileyo. Xa kuthelekiswa ne-304 alloy, i-321 ye-alloy insimbi engenasici ine-ductility engcono kunye nokuxhathisa ukuphuka koxinzelelo. Ukongeza, i-304L inokusetyenziselwa ukunganyanzeliswa kunye nokubola okungaphakathi.
I-alloy 321 (UNS S32100) yintsimbi ezinzileyo. Igcina ukumelana okuhle nokubola okungaphakathi kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-800-1500 ° F (427-816 ° C) kunye nemvula ye-chromium carbide. Ngenxa yokongezwa kwe-titanium kulwakhiwo, i-321 eshushu isongwe i-stainless steel plate isenokugcina uzinzo kwimeko yokwakheka kwe-chromium carbide. I-alloy 347 ingenxa yokongezwa kwe-niobium kunye ne-tantalum ukugcina uzinzo. .
I-Alloys 321 kunye ne-347 zihlala zisetyenziselwa ukusebenza kwexesha elide kwi-800-1500 ° F (427-816 ° C) kwiindawo ezinobushushu obuphezulu. Ukuba isicelo sibandakanya kuphela ukuwelda okanye ukufudumeza ixesha elifutshane, faka i-304L endaweni yayo.
Ubungakanani bokusebenza kobushushu obuphezulu bama-alloys angama-321 kunye nama-347 axhomekeke kwiipropathi zawo ezilungileyo zoomatshini. Xa kuthelekiswa ne-304, 304L, 321 kunye ne-347 zinokubangcono koxinzelelo kunye noxinzelelo lokumelana noxinzelelo. Oku kuvumela uxinzelelo lwezi alloys zizinzileyo ukudibana neAmerican Society of Mechanical Engineering boiler imigaqo kunye noxinzelelo lweenqanawa ezichaziweyo kubushushu obuphezulu. Ke ngoko, obona bushushu busebenzayo be-321 kunye ne-347 alloys yi-1500 ° F (816 ° C), ngelixa i-304, 304L inomda kwi-800 ° F (426 ° C).
I-321 kunye ne-Alloy 347 banomxholo ophezulu wekhabhoni, iinombolo zabo ze-UNS zezi: S32109 kunye ne-S34709.
409 409L Hot asongwe Stainless Plate
Ubunzima Pallet: 1.0MT - 3.0MT
410 410s Hot liqengqiwe Stainless Plate
Uyintoni umahluko phakathi kwe-409 kunye ne-410 insimbi engenasici:
I-409-ngaphandle kokongeza i-titanium, eyona modeli inexabiso eliphantsi, ihlala isetyenziswa njengombhobho wokukhupha imoto, yintsimbi engenantsimbi ye-ferritic (i-chrome yentsimbi), ilungele ukuwelda, ixabiso eliphantsi, umbhobho wokukhupha i-steam locomotive, kunye nomqolo womlilo
I-410-iMartensite (i-chrome yentsimbi ene-high-amandla), ukumelana kakuhle nokunxiba umhlwa, kufanelekile ukupompa. Ubume bayo bemichiza buqukethe i-13% ye-chromium, i-0.15% okanye ngaphantsi kwekhabhoni kunye nenani elincinci lezinye ii-alloys zokuqala. Izinto eziluhlaza zitshiphu, zinamandla kwaye zinzima ngonyango lobushushu. Ukusetyenziswa ngokubanzi kubandakanya iibheringi, izixhobo zonyango kunye nezixhobo kunye neepaneli zombane, kunye neendawo eziqinileyo.
410 430 430F 430LX intsimbi engenasici
410 intsimbi engenasici ilingana ne-1Cr13 yentsimbi ye-S41000 yentsimbi (i-American AISI, ASTM). I-0.01% yekhabhoni, i-0.13% ye-chromium 0.1 410 insimbi engenasici: ukuxhathisa ukubola, ukungabinakho ukusebenza, iibhloko zenjongo ngokubanzi, iivalves
Unyango lobushushu lwe 410 intsimbi engenasiciIsisombululo sonyango (° C) 800-9000 ukupholisa kancinci okanye i-750 yokupholisa ngokukhawuleza
I-430 yentsimbi engenasici ine-corrosion elungileyo kunye nenqanaba lesinyithi ngokubanzi, ukuqhuba kwe-thermal kungcono kune-austenite, ukwanda komlingani we-thermal kuncinci kune-austenite, ukudinwa kobushushu, ukongeza ukuzinzisa i-titanium, kunye neempawu zomatshini wesiza se-weld zilungile. Kuba uhombiso wokwakha, iinxalenye sokukhuphela ipetroli, izixhobo zombane zasekhaya, izixhobo zombane zasekhaya.
I-430F inqanaba lesinyithi kunye nepropathi yokusika simahla kwi-430 yentsimbi. Isetyenziswa lathes oluzenzekelayo, iibholiti kunye namandongomane.
I-430LX yongeza iTi okanye i-Nb kwi-430 yentsimbi, yehlisa umxholo we-C, kwaye iphucula inkqubo kunye nokuqina. Isetyenziswe kwiitanki zamanzi ashushu, iinkqubo zamanzi ashushu, izixhobo zangasese, izixhobo zasekhaya ezizinzileyo, iiflaya zebhayisekile, njl.
430 eshushu liqengqiwe ipleyiti yentsimbi
Ukuthelekiswa kwe-304 insimbi engenasici kunye ne-430 yentsimbi engenasici:
1. nokumelana: 430 intsimbi engenasici iqulethe i-16.00-18.00% ye-chromium, engenasiseko sentsimbi ye-nickel. I-304 insimbi engenasici iqulethe i-chromium kunye ne-nickel yentsimbi, ngoko ke ukuxhathisa kwe-stainless steel corrosion kungcono kune-304 insimbi engenasici.
2. uzinzo: 430 intsimbi engenasici i-ferrite, i-304 insimbi engenasici i-austenitic, i-304 insimbi ezinzileyo izinzile ngakumbi kune-430 insimbi engenasici,
3.ukuqina: 304 insimbi enobungqongqo obomeleleyo, yomelele kune 430 intsimbi engenasici
Ukuqhutywa kwe-4. 430 intsimbi engenasici I-ferrite ibhetele kune-304 intsimbi engenasiphelo yokuhambisa ubushushu,
5.Iipropati zoomatshini: 430 intsimbi engenasici yongeze into ezinzileyo yemichiza ye-titanium, iipropathi zomatshini zesiza se-weld zingcono kunentsimbi engama-304.
I-2507 eshushu eshushu yentsimbi ipleyiti
Yintoni 2507 Hot ipleyiti asongwe steel stainless
I-2507 yintsimbi ye-ferritic-austenitic (duplex). Idibanisa iipropathi ezininzi eziluncedo zentsimbi ye-ferritic kunye ne-austenitic iron. Ngenxa yokuba isinyithi siqulathe i-chromium ephezulu kunye ne-molybdenum, inokuxhathisa okuhle kakhulu ekufumaneni, umhlwa kunye nomhlwa ofanayo. Isigaba sesibini se-microstructure siqinisekisa ukuba isinyithi sinokuxhathisa okuphezulu koxinzelelo lwenkunkuma, kwaye amandla oomatshini nawo aphezulu.
Ipleyiti yokujonga intsimbi engenasici
Yintoni i ipleyiti yesinyithi yokujonga intsimbi
Ipleyiti yokujonga intsimbi engenasiciIpleyiti yokukhangela isebenzisa umxhuzulane womatshini ukubhoboza imingxunya yeemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu kumphezulu wentsimbi ongenanto.Intyatyambo yeHelingbone, i-oval encinci, intyatyambo ye-millet, intyatyambo eneepini ezintlanu, umngxunya ombombo ojikelezayo, umngxunya we-convex umngxunya, njl njl. I-1.non-slip, ixesha elide lokusetyenziswa; ukuthintela umlilo kunye nokungabinamanzi, kulula ukukhuhla okucocekileyo; Inkqubo yokutshixa elandelayo inokwenziwa ngaphandle kweminwe.
Ipleyiti yesinyithi ephothiweyo
Ukucoca i-Electrolytic: ukusebenzisa i-asidi ene-asidi (i-asidi eyomeleleyo), isampulu ekufuneka ipolishiwe ibekwe kwi-post-current (malunga ne-7 mA), kwaye i-anode inyibilike. Ngenxa yobukhulu bale ndawo ikhoyo ngoku, iinxalenye ezihamba phambili ziyanyibilika ngokukhawuleza, kwaye umphezulu uthambekele ekubeni ube tyaba, ufikelele kwisiphumo sokugqibela esiCociweyo (isiphumo sinokubonwa kwisithuba semizuzu eli-10). Umgaqo osisiseko wokuchithwa kombane: okufanayo nokucoca imichiza, oko kukuthi, ngokuphelisa ngokukhetha indawo encinci ye-convex yomphezulu wento yokwenza umphezulu ugude. Xa kuthelekiswa nokucoca ngamachiza, umphumo wempendulo ye-cathode ingasuswa, kwaye umphumo ungcono.
Wokucoca ngoomatshini: Ukuba umphezulu ombi wentsimbi engenazintsimbi ukuze ufezekise umphumo wokuhombisa kufuneka ube: isakhelo se-roller sikhazimlisiwe ngomatshini wokucoca ibhanti, okokuqala nge-120 # ibhanti elirhabaxa, lahla umbala ongaphezulu ukuya kwelinye, utshintshe i-240 # ibhanti elirhabaxa, yiphose ngaphezulu Xa umbala unyukile, tshintsha i-800 # ibhanti elirhabaxa kwaye uliphose kumbala ongaphezulu ngaxeshanye. Emva koko tshintsha i-1200 # ibhanti elirhabaxa kwaye ulahle umphumo wokuhombisa ipleyiti yentsimbi engenasici.
I-310 yentsimbi engenasici inomxholo wekhabhoni ophakamileyo we-0.25%, ngelixa i-310S intsimbi engenasici inomxholo wekhabhoni ophantsi we-0.08%, kwaye ezinye izinto zeekhemikhali ziyafana. Ke ngoko, amandla kunye nobulukhuni be-310 yentsimbi engenasici ziphezulu kwaye ukumelana nokubola kukubi kakhulu. Ukuxhathisa umhlwa kwe-310S insimbi engenasici kungcono kwaye amandla asezantsi kancinci. Insimbi engenasici engama-310S kunzima ukuyinyibilikisa ngenxa yomxholo wayo wekhabhoni, ngenxa yoko ixabiso liphezulu kakhulu.